•UMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi ucela ukufuniswa ubaba kaMelokuhle Mkhize ozalwa uNokukhanya Mkhize ongasekho emhlabeni. Sicela onolwazi athinte usonhlalakahle N. Mtolo ku 033 392 8612.
•UMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi ucela ukufuniswa ubaba ka-Asanda Matiti amthola kuBongiwe Matiti ongasekho emhlabeni owayehlala e-Imbali Unit 03 Buthelezi Road. Sicela onolwazi athinte usonhlalakahle N Mtolo ku 033 392 8612.
•Sicela ukufuniswa ubaba ka-Akhona Ntshaba umndeni ungowase Unit 1 eMbali. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uN. Khumalo ku 0333928605
•Sicela ukufuniswa umama nobaba baka Oratiloe Pretty Khali umndeni ungowase Ashburton. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uN. Khumalo ku 0333928605
•Sicela ukufuniswa ubaba kaMolemo Mbulawa. Umndeni usuka eMbali Stage 2. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uN. Khumalo ku 0333928605
•Usonhlalakahle osebenzela endaweni yaseMshwathi ucela ukufuniswa ubaba kaSibiya Thobani Siyabonga ongaziwa igama lakhe,igama likamama womntwana uPhindile Sibiya wase ndaweni yase Trustfeed-eGudlucingo area. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle osebenzela endaweni yaseMshwathi uNksZama Mbambo kulenombolo :033-502 2188
•UMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi eNew Hanover Service Office ucela ukufuniswa ubaba kaShandu Ayanda Musakamenzi amthola kuShandu Jabu Yvonne ongasekho wasoZwathini. Ubaba owaseMpangeni lapho bahlangana khona nomawengane. Onolwazi sicela axhumane nosonhlakahle uNks Mchunu kulezinombolo 0335022160 ngezikhathi zomsebenzi.
•I SAVF Social Services icela ukufuniswa abazali baka Mpendulo Mzobe. Igama likamama wakhe nguConstance Ntombifikile Mzobe ongaziwa. Igama likababa ngu-Ishmael naye ongaziwa. Onolwazi sicela athinte usonhlalakahle V. Zondi kulenombolo 033 342 1229.
•Sicela ukufuniswa abazali baka-Amahle Khumalo. Igama likababa uSyabonga Khumalo kanti umama uCarol Nene basendaweni yaseNqabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-T Mncwabe enombolweni ethi : 033 505 0087.
•Sicela ukufuniswa abazali baka-Amukelwa Ngobo. Igama likababa uSbonelo Ngcobo kanti umama u-Carol Nene basendaweni yaseNqabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-T Mncwabe enombolweni ethi : 033 505 0087.
•Sicela ukufuniswa abazali baXolani Dlamini. Igama likababa uSimphiwe Dlamini kanti umama u-Carol Nene basendaweni yaseNqabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-T Mncwabe enombolweni ethi : 033 505 0087.
•Sicela ukufuniswa umama ka-Amile Gwala igama lakhe kungu Wendy Gwala ongaziwa ukuthi wayaphi owayengowase Zinketheni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uThabsile Ntuli enombolweni ethi : 033 502 2160.
•Sicela ukufuniswa abazali bakaSthabiso Mchunu, Scelimpilo Mchunu kanye no Philasande Mchunu. Igama likamama uNondumiso Mchunu waseKhokhwane Elandskop. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtsele enombolweni ethi : 033 505 0087.
•Sicela ukufuniswa uVusimuzi Zaca owayehlala eRichmond ongubaba kaNonhlanhla Dlamini ozalwa uNtombifikile Dlamini ongasekho. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-S.D Sibisi enombolweni ethi : 033 505 0083.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaMkhize Uyomkela amthola kuMadlala Philile odabuka e-Elandskop. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtsele enombolweni ethi : 033 505 0087. •Sicela ukufuniswa ubaba laLindelani beno-Asiphe Mathula. Umama wabo uSebenzile Mathula owayehlala eTamboville. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uVilakazi enombolweni ethi : 033 505 0084.